Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 1t l0113 lat
Ny lanitra mitory
Alatsinainy 31 Des.12
"Ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra; ary ny habakabaka manambara ny asan'ny tanany. Ny andro samy miteny amin'ny andro mandimby azy, ary ny alina samy manolo-pahalalana amin'ny alina mandimby azy. Tsy misy teny na fiteny anefa; tsy re izay feony. (Sal. 19:1-3; jer. koa ny Rôm. 1:19,20). Tamin'ny fomba ahoana no efa nanandramanao ny fahamarinan'ireo andalan-teny ireo? Tamin'ny fomba ahoana no nanampian'ny siansa môderina antsika hahay hankasitraka bebe kokoa ny hery sy ny fahendren'Andriamanitra amin'ny maha-Mpamorona Azy?
Tsy izao tontolo isan-karazany rehetra izao tsy akory no afaka manohana ny aina. Raha ny marina aza dia toa tsy maintsy efa tena voavolavola tsara izao tontolo izao mba hahatonga ny aina hisy. Voalohany, ireo vondron'ny raha rehetra fanorenana - ny atôma izany - dia tsy maintsy mafy orina tsara tokoa mba ho azo foronina ireo zavatra mivaingana mafy. Ny mahamafy orina ny atôma dia miankina amin'ireo hery izay mihazona ireo singa ao amin'ny atôma hitambatra. Ao amin'ny atôma dia misy pitinjaka manana fahan'aratra mifanintona sy mifanosika. Tsy maintsy mifandanja tsara ireo hery manintona sy manosika. Raha matanjaka loatra ireo hery manintona, dia ireo atôma lehibe ihany no hiforona, ka tsy hisy ny hidrôzenina. Raha tsy misy ny hidrôzenina, dia tsy hisy ny rano, ary tsy hisy noho izany ny aina. Raha matanjaka loatra ireo hery manosika, dia ireo atôma bitika, toy ny hidrôzenina, ihany, no hiforona, dia tsy hisy ny karibônina na ny ôksizenina. Raha tsy misy anefa ny ôksizenina, dia tsy hisy ny rano sy ny aina. Ny karibônina koa dia tena ilaina ho an'ireo endri-piainana rehetra araka ny fahalalantsika azy.
Tsy vitan'ny hoe tsy maintsy mafy orina ny atôma, fa tsy maintsy afaka mifamaly asa izy ireo hahafahan'izy ireo mamorona taharo simika ('composés chimiques') samy hafa maro dia maro. Tsy maintsy mifandanja ireo hery mihazona ireo môlekiola hitambatra sy ny angovo ilaina hanapotika ny môlekiola mba hamela ny fihaonan-jaka ara-tsimia ('réactions chimiques') hisy, izay iankinan'ny aina.
Ny toetr'ity tontolo misy antsika ity izay mety indrindra ho an'ny fiainana dia nahatonga ireo manam-pahaizana hitolagaga sy nitarika ny maro tamin'izy ireo hilaza fa, araka ny fahitana azy, dia nisy Zava-manana aina tena misaina namolavola izao tontolo izao.
Inoana marimarina koa fa novolavolaina tamim-pahendrena ity izao tontolo izao ity mba hisian'ny aina. Ireo mari-pana samy hafa dia tsy maintsy mety tsara amin'ny fiainana; noho izany, ny elanelana amin'ny masoandro, ny hafainganam-pihodin'ny tany/ny planeta, ary ireo zavatra mandrafitra ny rivotra iainana ('atmosphère') dia tsy maintsy mifandanja araka ny tokony ho izy avokoa. Misy tsipirian-javatra maro hafa eo amin'izao tontolo izao tsy maintsy voavolavola tsara. Marina tokoa fa miseho eo amin'ny zavatra nohariany ny fahendren' Andriamanitra.